St George sika, University of London
St George sika, University of London Yokuxhumana
Wasekelwa : 1733
Ungakhohlwa xoxa St George sika, University of London
Bhalisa at St George sika, University of London
Siyaziqhenya ekwenzeni okungcono isipiliyoni kunokwenzeka for abafundi bethu – ekwakheni phezu 250 iminyaka emisha kanye ngokugcina ijubane nge zempilo a NHS ekushintsheni. Ukuzinikezela kwethu abafundi, abasebenzi kanye alumni lusekelwe ukuzibophezela sixoxa nabo ekwenzeni ngcono phambili nempilo.
Siyaziqhenya ukwahlukana kwethu, enikeza abafundi kusuka anhlobonhlobo izizinda ithuba ukusebenza futhi ngifunde campus impilo sibonakalisa uhla oluphelele ukuzibonakalisa kwezempilo.
St George sika, University of London is nyuvesi kuphela UK abazinikezele emfundweni wezokwelapha kanye isayensi yezempilo, ukuqeqeshwa kanye nezinhlelo zokucwaninga. distinctiveness lwethu lusekelwe sigxile okukhethekile kwezesayensi yempilo imithi futhi silwela ukuletha indlela ezintsha futhi ngokubambisana kukho konke esikwenzayo.
Sinikeza elisezingeni lomhlaba multi-professional isayensi yezempilo ifundo kusihlomisela abahlengikazi bethu ukuze ahlangabezane nezidingo lezamaphilo lanamuhla ngocwaningo efanele lwesayensi, umsebenzi oncomekayo emitholampilo, strong emakhono ekuchumana working team-based. Ukwabelana a imvelo ngeziguli ne besibhedlela esikhulu London imfundiso, indlela esenza ngayo izinto ezintsha imiphumela imfundo kahle laphetha, odokotela onekhono kakhulu, ososayensi, futhi impilo nokunakekela social ochwepheshe.
Siphinde sisebenze ngokubambisana abahlinzeki bezempilo kuyo yonke eningizimu yeLondon ukuqinisekisa ukuthi izifundo zethu zibonisa yakamuva imikhuba emitholampilo nokuthi abafundi bethu bayazuza nasemathubeni avelayo abangefani emitholampilo ukubekwa. I ingcebo yolwazi emitholampilo ekhona sezizathu kungani St George iyaqhubeka yini ukuze ithandwe kangaka nabafundi.
I Faculty of Health, Social Care and Education ukuthi sigijima ngokubambisana Kingston University lifundisa izifundo kuhlanganise ubuhlengikazi, Midwifery, esimweni, isayensi isisebenzi sezimo eziphuthumayo, Physiotherapy kanye nomsebenzi social.
Amahlelo wethu kukhona okunzima kodwa thina ngokwethu ngokuziqhenya on the support siqu sinikeza abafundi bethu, nokuqinisekisa bona babe lokuqala rate odokotela nososayensi, ngezinyawo zabo ngokuqinile emhlabathini. Sikholwa ngukuthi wonke umuntu kufanele bakwazi ukufinyelela izinzuzo yokutholakala bezokwelapha nokuthi ucwaningo kufanele kube yingxenye yokuqeqeshwa kanye nemfundo ochwepheshe bezempilo.
Sine ezingaphezu kuka 250 iminyaka umsebenzi oncomekayo kanye emisha ucwaningo kanye nemfundo okuholele ekutheni ukuyengelwa groundbreaking kwezokwelapha kwezempilo. alumni zethu zihlanganisa Edward Jenner, John Hunter, UMuriel Powell noPatrick Steptoe. umisa zethu ezintathu ucwaningo ukugxila ukutholakala bezokwelapha kanye zesayensi, phambili nokwelashwa isifo emkhakheni labantu impilo, isifo senhliziyo kanye ukutheleleka – ezintathu yezinselele ezinkulu empilweni emhlabeni wonke 21st ekhulwini.
Sizibophezele asathuthuka ukuqonda komphakathi kanye ukuhileleka izinhlelo zethu zocwaningo futhi ngenkuthalo neqhaza kusebentisana kuwo wonkhe London, oxhumanisa i-abafundi nabacwaningi odokotela kanye nabaqashi esifundeni.
Inhloso yethu ukuthuthukisa abantu abahlangabezana nezidingo kwezempilo namuhla nezinselele kwezempilo kusasa futhi thina sibamukele ngemfudumalo abafundi abanezindinganiso ezinjengezakho yethu, amandla nesifiso sokuvelela.
Healthcare Science (bokuphila Sciences)
Midwifery / uMbelethisi Registered for abahlengikazi ebhalisiwe
Midwifery / Registered uMbelethisi
Nursing / ongumhlengikazi
Zezimo eziphuthumayo Practice
Isayensi Zezimo eziphuthumayo
Sine eside, umlando elikhazimulayo yokuqeqeshwa odokotela, eyaqala ezingaphezu kuka 250 iminyaka. Phakathi alumni zethu singakwazi ukubala ezinye zezindlu zooyise owasungula imithi. Thina baziwa ndlela yethu innovative imfundo asathuthuka futhi abahlengikazi bethu ngempela isilungele yonya kanye nemivuzo ukuvuma inselele futhi ushintsha.
1733 St George Hospital ivula ngaso Lanesborough House at Hyde Park Corner. Lesi sibhedlela esisha luyatholakala kwi amathathu phansi futhi yokuhlala 30 iziguli ezigcemeni ezimbili, elinye libe amadoda eyodwa kwabesifazane.
1751 Ukubhaliswa loluhlelekile we osafunda odokotela iqala.
1754 Udokotela ohlinzayo ovelele uJohane Hunter uqala ukwenza izifundo zokutadisha at St George.
1796 Edward Jenner (umfundi 1770 ukuze 1774) ngempumelelo wenza wokugoma wokuqala ngokumelene ingxibongo, okuholela ekugcineni wokuqeda ephelele lesi sifo 1980. I fihla of Blossom, inkomazi elisetshenziswa Jenner sika ingxibongo experiment, wethulwa St George sika, University of London indodana Jenner ngo 1857, futhi uye wahlala nesibhamu nyuvesi kusukela.
1800 With isakhiwo Lanesborough House ukuwela labhidlika, umncintiswano oluphethwe ukwakha isakhiwo esisha esinemibhede engu-350 esibhedlela. Lokhu won by William Wilkins, wamapulani English omsebenzi wakhe edume kakhulu yile okuthiwa i-National Gallery.
1844 Benjamin Brodie, udokotela ohlinzayo at St George Hospital, esemisiwe njengenceku uMongameli wokuqala we-Royal College of Odokotela Abahlinzayo. Brodie kwakuyobasiza nokuba qhubekela amiswe uMongameli wokuqala we-General Medical Council e 1858.
1858 Anatomy Gray sika, umkhiqizo ukusebenzisana phakathi Henry Gray kanye yokubonisa nokwakheka Henry Vandyke Carter, omunye umyalo omkhulu kunayo impumelelo kwezobuciko futhi zesayensi ishicilelwe.
1867 Mr Atkinson Morley eshiya imali St George esibhedlela isakhiwo kanye nokugcina eyihlane convalescent ekhaya evela umsindo Igagasi central London.
1895 Patrick Manson uqokwa womfundisi Tropical Medicine and unikeza uchungechunge sokuqala ngqá izinkulumo izifo zasezindaweni ezishisayo at St George sika. Manson waqhubeka wafunyana isikhambesi ILondon School of Hygiene and Tropical Medicine e 1899.
1899 Edward Wilson ofanelekela esibhedlela Medical School St George sika. On ziqu acelwe ukuba ukujoyina uCaptain Scott wokuqala Antarctic Expedition, kusale eNgilandi 1901 njengoba udokotela ohlinzayo junior futhi owayeyisazi sesayensi yezilwane. Ngo 1910 yena Ufika ngokushesha ill-fated kwaholela by Scott ku-South Pole kanye elishabalalayo namanye amalungu eqembu bebuya eSouth Pole.
1915 St George sika enyuvesi yokuqala eLondon ukuba sivume abafundi besilisa phakathi neMpi Yezwe One. Helen Inglby, omunye walaba besifazane abane amukela eceleni Ethelberta Claremont, Marian M. Bostock futhi Elizabeth O'Flynn, iya waba Udokotela ohlola imiphumela yaselebhu we Albert Einstein Medical Centre e-Philadelphia in1945.
1939-1945 Phakathi Second World War St George kuba iyunithi Emergency Service Hospital, ukuhlinzeka 200 imibhede for ezimpini kanye 65 imibhede for abagulayo ezamasosha.
1948 NHS uzoqala ngokugcina 5 Julayi 1948 ukuhlinzekela kwezempilo kuzo zonke izakhamuzi, okusekelwe isidingo, hhayi ikhono ukukhokha.
1954 Aubrey Leatham esemisiwe njengenceku St George wokuqala Consulting wenhliziyo. Leatham Waziwa kakhulu ukuklama inguqulo entsha futhi ngcono of the Lokusebenza Oluhlelekile, futhi owasungula endocardial pacemaker inhliziyo wokuqala emhlabeni.
1958 Esokuqala operation indwelling pacemaker Kwenziwa at St George sika.
1973 Isakhiwo iqala esizeni esisha St George sika at Tooting, London.
1976 Isigaba sokuqala se-Medical School kuvula Tooting nge 80 abafundi.
1978 Pioneer zokwelapha ukungabi nenzalo Patrick Steptoe, (nowayekade engumfundi, Nbrbsh 1939), unesibopho, eceleni isazi sezinto eziphilayo futhi physiologist Robert Edwards, ngoba ukuvela fertilization kwesibeletho (IVF), okuholela ekuzalweni kwengane yokuqala test-tube in 1978.
1980 St George sika at Hyde Park iwa ngokokuqala kokugcina futhi HM Queen Elizabeth II kuvula entsha St George Hospital and Medical School at Tooting ku 6 Novemba 1980.
1995 I-Faculty of Health and Social Sciences, a ukusebenzisana ngokuhlanganyela phakathi SGUL noKingston University Kumiswa, enikeza ezempilo kanye nezemfundo ukunakekelwa social kwezobuhlengikazi, imfundo Midwifery futhi esimweni.
2000 St George sika UK isikhungo sokuqala ukwethula MBBS Graduate Programme Ukungena (GEP), iminyaka emine fast-track degree zezokwelapha inkambo evulekile ukuze abaphothule in yisiphi isiyalo.
2008 50 Iminyaka eminingi ngemva kokuhlinzwa pacemaker lokuqala wenziwa at St George Hospital, ukuhlinzwa 50,000th libuye kwenziwa ngempumelelo esiBhedlela.
2011 Umhlangano wokuqala ubudokotela enrols graduate Uhlelo imithi e-University of Nicosia, Cyprus.
2013 I postgraduate Diploma Dokotela Zihlanganise Studies Ukufundisa Team iwina ngq Amathemba postgraduate Award Imfundiso Team Khipha ku-internet (Isayensi, Technology and Engineering).
2014 HRH Princess Anne kuvula UBE ST kaGeorge, the international umfundi isikhungo eLondon.
2014 Ucwaningo olwenziwe yi-Population Health Institute on imiphumela ukubhema sabazali empilweni zokuphefumula phakathi izingane imiphumela in a Bill Westminster lokuvala ukubhema ngezimoto lapho izingane abakhona.
Uyafuna xoxa St George sika, University of London ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
St George sika, University of London kumephu
Izithombe: St George sika, University of London Facebook ezisemthethweni
St George sika, University of London Izibuyekezo
Joyina ukuze kuxoxwe of St George sika, University of London.